आइतबार अक्टोबर 17, 2021 |
आइतबार अक्टोबर 17, 2021
विषय — प्रायश्चितको सिद्धान्त
वर्ण पाठ: स्वर्ण पाठ: भजनसंग्रह 25 : 8
“"परमप्रभु साँच्चै असल अनि इमान्दार हुनुहुन्छ। उहाँले पापीहरूलाई ठीक मार्गमा बाँच्ने तरिका सिकाउनु हुन्छ।"”
उत्तरदायी पढाइ: भजनसंग्रह 103 : 1-5, 22
5 परमेश्वरले हामीलाई प्रशस्त राम्रा कुराहरू दिनुहुन्छ। उहाँले हाम्रो जवानीलाई गरूड जस्तो नयाँ तुल्याउनुहुन्छा।
22 परमप्रभुले प्रत्येक थोक प्रत्येक ठाउँमा बनाउनु भयो। परमेश्वरले प्रत्येक ठाउँमा भएका सबै थोकहरूमा राज गर्नु हुन्छ, अनि ती सबै थोकहरूले परमप्रभुको गुण-गाऊनु पर्छ! हे मेरो प्राण परमप्रभुको गुण-गान गर!
1. भजनसंग्रह 25 : 1, 6-8
1 हेपरमप्रभु, म स्वयंलाई नै तपाईंकहाँ अर्पण गर्दछु।
2. यूहन्ना9: 1 (जस्तै)-3, 6-8, 10, 11
3 येशूले उत्तर दिनुभयो, यो न त उसको न त उसकी माताको पापहो जसले उसलाई अन्धा जन्माइन्। ऊ जन्मैदेखिको अन्धो हो ताकि उसलाई निको पारेर मानिसहरूलाई परमेश्वरको शक्ति देखाउन सकियोस्।
7 येशूले त्यस मानिसलाई भन्नुभयो, जाऊ सिलोआमाको तलाउमा गएर पखाल। तब त्यो मानिस तलाउमा गयो र धोयो। अब उ देख्ने लायकको भयो।
8 कोही मानिसहरूले पहिले त्यस मानिसलाई भीख मागिरहेको देखेका थिए। ती मानिसहरू र उनको छिमेकीहरूले भने, हेर! यो त्यही मान्छे होइन जो सधैं बसेर भिक माग्दथ्यो?
10 मानिसहरूले जान्न चाहन्थे, के भयो? तिमीले कसरी दष्टि प्राप्त गर्यौ?
11 त्यस मानिसले जवाफ दिए, त्यो मानिस जसलाई येशू भन्दछौ उहाँले धुलोबाट हिलो बनाउनु भयो। उहाँले त्यो मेरो आँखामा राखिदिनु भयो। तब उहाँले मलाई भन्नुभयो, सिलोआममा जाऊ र पखाल। तब म सिलोआममा गँए र पखालें। अनि तब मैले देख्ने थालें।
3. यूहन्ना 13 : 1, 3-17
1 योप्राय यहूदीहरूको निस्तार चाड आइसकेको बेला थियो। येशूले जान्नु हुन्थ्यो कि अब उहाँ को संसार छोडने समय आइपुग्कोछ। अब आफ्ना पिता कहाँ फर्की जाने समय आइपुगेकोछ। येशूले सधैं तिनीहरूलाई प्रेम गर्नु भयो जो उहाँसंग त्यस संसारमा थिए। अब येशूले तिनीहरूलाई आफ्नो पूर्ण प्रेम देखाउने समय आएको थियो।
6 येशू शिमोन पत्रुस कहाँ आउनु भयो। तर पत्रुसले येशूलाई भने, प्रभु, मेरो खुट्टा धुनु पर्दैन।
7 येशूले जवाफमा भन्नुभयो, अहिले मैले के गरिरहेछु तिमी जान्दैनौ। तर पछि बुझने छौं।
8 पत्रुसले भने, अहँ! तपाईंले मेरो खुट्टा कहिल्यै धुनुहुँदैन। येशूले भन्नुभयो, यदि मैले तिम्रो खुट्टा धोइनँ भने, मसँग तिम्रो कुनै अंश रहने छैन।
9 शिमोन पत्रुसले भने, प्रभु, मेरो खुट्टामात्र होइन, मेरो हात र टाउँको पनि धोइदिनु हवस्।
10 येशूले भन्नुभयो, नुहाइसके पछि एक मानिस सम्पूर्ण रूपले सफा हुँदछ। उसको खुट्टामात्र धुनु पर्दछ। तिमीहरू सबैजना शुद्ध छौ तर कोही कोही मात्र छैनौ।
11 यशूले उहाँको विरुद्ध को जाने छ चिन्नुहुन्थ्यो। त्यसैकारणले येशूले भन्नुभयो, तिमीहरूमा सबै शुद्ध छैनौं।
12 येशूले तिनीहरूका खुट्टा धोइसक्नु भयो। तब आफ्नो पोशाक लगाई टेबलतर्फ फर्की जानुभयो उहाँले भन्नुभयो, तिमीहरू जान्दछौ मैले तिमीहरूलाई के गरें?
13 तिमीहरूले मलाई गुरूज्यू र प्रभु भनेर बोलाउँछौ। अनि यो ठीक हो किनभने म त्यही हुँ।
4. यूहन्ना 19 : 1, 2, 6-11, 14-19
6 जब मुख्य पूजाहारीहरू र यहूदीका द्वारपालहरूले येशूलाई देखे तिनीहरू चिच्याए, क्रूसमा यसलाई टाँग्नुहोस्, क्रूसमा यसलाई टाँग्नुहोस्। तर पिलातसले भने, तिमीहरू यिनलाई लैजाऊ र क्रूसमा टाँग । मैले उनीमाथि आरोप लगाउने कुनै कारण नै पाईनँ।
7 यहूदीहरूले उसलाई उत्तर दिए, हाम्रो व्यवस्था बमोजिम ऊ मर्नै पर्छ, किनभने उसले दावी गरेको छ कि ऊ परमेश्वरको पुत्र हो।
9 पिलातस महलभित्र फेरि पसे। उनले येशूलाई सोधे, तिमी कहाँबाट आएका हौ? तर येशूले उसलाई जवाफ दिनुभएन।
10 पिलातसले भने, के तिमी मसँग बोल्दैनौ? याद गर, तिमीलाई मुक्त पार्ने अधिकार मसित छ। अनि तिमीलाई क्रूसमा टाँग्ने अधिकार पनि मसित छ।
11 येशूले जवाफ दिनुभयो, तपाईंलाई माथिबाट नदिइएको भए ममाथि तपाईंको केही अधिकार हुने थिएन। त्यसैले ती मानिस जसले मलाई तपाईंलाई सुम्पियो उ तपाईं भन्दा महापापको दोषी हो।
14 यो प्रायः निस्तार चाडको तयारी गर्ने दिनको मध्या भएको थियो। पिलातसले यहूदीहरूलाई भने, तिमीहरूका राजा यहाँ छ!
15 यहूदीहरू चिच्याए, त्यसलाई उतै लानु होस्, लानु होस्! त्यसलाई क्रूसमा मार्नू होस्। पिलातसले यहूदीहरूलाई सोधे, के मलाई तिमीहरूको राजालाई क्रूसमा टाँग्न लगाऊँछौ? मुख्य पूजाहारीहरूले भने, सिजर मात्र हाम्रो राजा हुनुहुन्छ।
17 येशूले आफ्नो क्रूस बोक्नु भयो अनि उहाँ खोपडी ठाऊँ तर्फ जानु भयो हिब्रू भाषामा गलगथा भनिन्छ।
19 पिलातसले संकेत पटमा लेखे अनि क्रूसमा टाँसिदिए। त्यो संकेतपटमा लेखिएको थियो। नासरतको येशू, यहूदीहरूका राजा।
5. रोमी5: 8 (भगवान), 10, 11